ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ် နှင့် မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်, sandra bullock and Myanmar Astrology,ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် ဇူလိုင်လ ဟောကိန်းများ
# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ »
# ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ် နှင့် မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်Published July 27, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	ဟောလီးဝုဒ် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ် (Sandra Bullock) ဆိုရင် မြန်မာပရိတ်သတ် တော်တော်များများ သိကြပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ 1990 ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ “Speed” ဇာတ်ကားမှာ မင်းသားချော “ကိနူးရိဗ် (keanu reeves) နဲ့ တွဲဖက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဒီ ဇာတ်ကားဟာ အလွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပြီး တက်သစ်စ မင်းသမီး ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ်ကိုလည်း လူသိများ ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။
အသက် (၄၆)နှစ်ဟာ ဟောလီးဝုဒ် မင်းသမီး ဆန်ဒရာ ဘူးလော့အတွက် အင်မတန် ထူးခြားတဲ့ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ သူဟာ Academy Award ဆုကြီးကိုသာမက ၊ Screen Actor Guild ဆု ၊ Goldend Globel Award ၊ Teen Choice Awardဆုများကိုပါ တပြိုင်တည်း ချီးမြှင့် ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနှစ်ဟာ သူ့ဘ၀ အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ အအောင်မြင်ဆုံး နှစ်တစ်နှစ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီ ဆောင်းပါးကို ရေးဖြစ်သွားတာဟာ ဆန်ဒရာဘူးလော့ဂ်ရဲ့ အသက်(၄၆)နှစ် တစ်နှစ်တာ ကံကြမ္မာဟာ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ် ဆောင်းပါးတွေထဲက “မွေးနေ့ ဗေဒင်တွက်ကြမယ်” ဆောင်းပါးပါ အချက်တွေ နဲ့ “မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျလျှင်” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါး နှစ်ခုနဲ့ ထူးထူးခြားခြား တိုက်ဆိုင်နေလို့ မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်ပညာကို လေ့လာလိုက်စားနေကြသူများအတွက် ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆန်ဒရာဘူးလော့ဂ်ကို 1964 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 26 ရက်(တနင်္ဂနွေ) နေ့မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံ ၊ ဗားဂျီးနီးယား ပြည်နယ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ “မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ်” ဆောင်းပါးလေးကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီး အဲဒီထဲက အတိုင်း သူ့ရဲ့ မူလဇာတာ နဲ့ ကောဇာ ဇာတာတို့ကို ချကြည့်ရအောင်။ သူရဲ့ မူလမဟာဘုတ်က (၃)ကြွင်း မဟာဘုတ်ဖြစ်ပြီး ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မွေးနေ့မှာ ကျရောက်နေတဲ့ ကောဇာအကြွင်းကတော့ (၆)ကြွင်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ မဟာဘုတ်တိုင် နှစ်ခုကို တွက်ချ ပေးထားပါတယ်။
အဲဒီလို တိုင်(၂)တိုင် ထူပြီးပြီ ဆိုရင် မွေးနေ့ ဗေဒင်တွက်ဖို့အတွက် အဓိက အချက်(၃)ခုကို ယူရပါမယ်။ အဲဒါတွေက – -
(၁) မိမိ မူလမွေးနေ့ ။ (၂) တွက်လိုသော နှစ်မွေးနေ့တွင် ကျရောက်သော နေ့ ။ (၃) ထိုနှစ်အတွက် “သက္ခတ်” (သက်ရောက်)ဂြိုဟ် တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ်ရဲ့ မူလ မွေးနေ့ = တနင်္ဂနွေနေ့
(၂) အသက် (၄၅)နှစ် ပြည့်မွေးနေ့ = တနင်္ဂနွေနေ့ (မွေးနေ့မွေးရက် ထပ်တူကျနေပါတယ်၊ မှတ်သားထားပါ)
(၃) အသက် (၄၆)နှစ် ရဲ့ သက္ခတ် = ကြာသပတေး သက္ခတ် ဆိုပြီး တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီတော့ နောက်ဆုံး အဆင့်အနေနဲ့ မဟာဘုတ်ခွင် အလွတ်တစ်ခုရှာပြီး အပေါ်က ဂြိုဟ်တွေကို လိုက်ပြီး ထည့်ကြရအောင်။ (တနင်္ဂနွေက (၂)လုံးဖြစ်နေတော့ တစ်ခွင်တည်းမှာ နှစ်လုံး နှစ်လုံး ထည့်ရမှာကို သတိထားပါ) ။ အဲဒီတော့ အောက်က မဟာဘုတ် ခွင်ကို ရလိမ့်မယ်။
ဒီမှာ ဘာထူးခြားချက် သွားတွေ့လည်းဆိုတော့ ရာဇမှာ ရှိတဲ့ မွေးနံ တနင်္ဂနွေ ကို ထည့်မတွက်ဘဲနေရင်တောင်မှ ကျန်ဂြိုဟ်(၅)လုံး ဟာ အောက်တန်းဆိုတဲ့ (ပုတိ ၊ ဘင်္ဂ ၊ မရဏ) မှာ မရှိဘဲ အားလုံး အထက်တန်းမှာချည်း ရောက်နေတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တွက်ကြည့်ရင် ဒီလို အောက်ခွင်မှာ ဂြိုဟ်တစ်လုံးမှ မရှိတဲ့ အနေအထားကို (၁၀) နှစ် (၁၅)နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်ကြုံဖို့ ခက်လှတယ်ဆိုတာ တွေ့လိမ့်မယ်။
နောက်ပြီး ကြာသပတေးဂြိုဟ်ဟာ တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက် (ပဉ္စပွတ်ဂြိုဟ်) တနည်း (န၀င်းဂြိုဟ်) လို့ ခေါ်တဲ့ အောင်မြင်ရေး ဂြိုဟ်ကြီးလည်း ဖြစ်တယ်။ တနင်္ဂနွေ နဲ့ ကြာသပတေးကလည်း “အောင်ပ ၊ ကုလား ၊ ဆွေသား ၊ တော်ရင်း” ဆိုတဲ့ မိဿက ဓာတ်အတွဲ လည်းဖြစ်နေပြန်တယ်။ တကယ်လို့ သက္ခတ်ဂြိုဟ်ဟာ ကြာသပတေးဂြိုဟ် မဟုတ်ဘဲ အခြားဂြိုဟ်ဖြစ်နေရင် ဒီလောက်ကောင်းနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
ဒီလို ကောင်းမွန်လှတဲ့ ဂြိုဟ်အနေအထားတွေကြောင့် ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ်ဟာ အသက် (၄၆)နှစ်မှာ အကယ်ဒမီဆုကြီး အပါအ၀င် ဆုကြီး (၃)ဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီး (Blind Side) ဇာတ်ကားဟာလည်း တစ်နှစ်အတွင်း အမြတ်ငွေ သန်းပေါင်း (၂၅၀)လောက် မြတ်စွန်းသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါပေမယ့် ပေါ့လေ။ ဆန်ဒရာဘူးလော့ဂ်ရဲ့ အသက်(၄၆)နှစ်ရဲ့ ထူးခြားချက်နောက်တစ်ခုကတော့ “မွေးနေ့မွေးရက်” ထပ်တူကျနေခြင်းပါဘဲ။ သူ့ရဲ့ မူလမွေးနေ့ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ ဖြစ်သလို (၄၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဟာလည်း တနင်္ဂနွေနေ့ဘဲ ဖြစ်နေ ပြန်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ “မွေးနေ့မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့သော်” ဆောင်းပါးကို ရေးပြီး နောက်ပိုင်း မွေးနေ့မွေးရက် ထပ်တူကျမှုတွေကို အတော်များများ လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနတွေ ထပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရလာတဲ့ အဖြေကတော့ သိပ်မကောင်းလှဘူးခင်ဗျာ။ မွေးနေ့မွေးရက် ထပ်ပြီး ဘာမှ မဖြစ်တာက ရာနှုံး (၂၀)လောက်ဘဲ ရှိပါတယ်။ (၈၀)% ကတော့ ကျန်းမာရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေး ၊ လူမှုရေး ပြဿနာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ကြုံကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဆို ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ် ကျတော့ကော။ ဖြစ်ပါသဗျား။ တစ်ဖက်က ဒီလို အသက် (၄၆)နှစ်ထဲမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ရနေတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ဖက်က သူနဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ “ဂျက်ဆီ ဂျေ ဂျိမ်း” နဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီး ကွာ ရှင်းပြတ်စဲခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ဧပြီလမှာ ကွာရှင်းတာဖြစ်လို့ သူ့အသက် (၄၆)နှစ် မပြည့်သေးပါဘူး။ ဒီ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာဟာ မွေးနေ့မွေးရက် ထပ်တာ တစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ “ပက္ခတ်” မိနေတာလည်း ပါသဗျ။ အပေါ်က မဟာဘုတ်ခွင်ကို ကြည့်ရင် “သိုက်” မှာ ရှိတဲ့ ဂြိုဟ် (၃)လုံး နဲ့ ရာဇမှာ ရှိတဲ့ ဂြိုဟ်(၂)လုံး ဟာ အခြင်းခြင်း ပက္ခတ်မိနေ ကြပါတယ်။ (သိုက်) မှာ ဂြိုဟ် (၃) လုံး နဲ့ (ရာဇ) မှာ ဂြိုဟ် (၂)လုံး ရှိနေတော့ – စုစုပေါင်း ပက္ခတ်အား = ၃ x ၂ = ၆ , ပက္ခတ်အား (၆) ရပါတယ်။ အားပြင်းပါတယ်။ မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ရာမှာ ပက္ခတ်ကတော့ အနည်းနဲ့ အများ မိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် (၁)အား ၊ (၂) အား လောက်ကတော့ သိပ်ပြဿနာ မရှိလှပါဘူး။ (၃)အား ကျော်လာရင်တော့ ပြဿနာ ရှိလာပါပြီ။
“ပက္ခတ်” အကြောင်းကိုတော့ ကျွန်တော့ ဆောင်းပါးတွေမှာ အကြိမ်ကြိမ် ရေးခဲ့လှပါပြီ။ နာမည်မှာဘဲ “ပက္ခတ်” မိမိ ၊ အခုလို တစ်နှစ်စာတွက်တဲ့ မွေးနေ့ ဗေဒင်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပက္ခတ်မိနေရင် Accident , ခွဲစိတ်ခံရမှု ၊ သွေးထွက်သံယို ထိခိုက်မှု ၊ စီးပွားကျခြင်း ၊ ရာထူးကျခြင်း ၊ လုပ်ကြံခံရခြင်း ၊ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း ဆုံးရှုံးခြင်း ၊ သဘာဝ ဘေးဥပဒ်ကြီးများ ကြုံရခြင်းများကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အခု ဆန်ဒါရာ ဘူးလော့ဂ် မိထားတဲ့ ပက္ခတ်ကတော့ (သိုက်+ရာဇ) ပက္ခတ်ဖြစ်လို့ အားပျော့ ပေမယ့် သူက အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာကို အများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ ပက္ခတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ် ပက္ခတ်အမျိုးအစားက ဘယ်လို ဒုက္ခ ၊ ပြဿနာ အမျိုးအစားကို ဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတာ နောက်ဆောင်းပါးတွေမှာ ဆက်ပြီး တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ ဒီဆောင်းပါးကတော့ ဒီလောက်နဲ့ဘဲ ရပ်နားပါတော့မယ်။
ဖတ်ရှုသူအားလုံး ကျန်းမာခြင်း ၊ ချမ်းသာခြင်း ၊ ကာယသုခ ၊ စိတ္တသုခ တို့နှင် ပြည့်ဝကြပါစေကုန်သော်။
မှတ်ချက်။ ။ “မွေးနေ့ ဗေဒင်တွက်ကြမယ်” ကို ပြန်၍ ဖတ်လိုလျှင် ဤနေရာကို နှိပ်ပြီး လင့်ခ် သွားလိုက်ပါ။ “မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျလျှင်” ကို ပြန်၍ ဖတ်လိုလျှင် ဤ နေရာကို နှိပ်ပြီး လင့်ခ် သွားလိုက်ပါ။
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	15 comments on “# ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ် နှင့် မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်”	Moe Thaike on July 28, 2011 at 8:36 am said:
Juno on July 29, 2011 at 12:37 pm said:
ဆရာ ၁ ကြွင်းမဟာဘုတ် ဗုဒ္ဓဟူးသားအတွက် ဆရာပြောတဲ့နည်း အတိုင်းတွက်တာ ယခု ၂၀၁၁ မှာ မွေးနေ့မွေးရက် တထပ်တည်း ကျတဲ့အပြင် သက္ခကလဲ ဗုဒ္ဓဟူးဘဲရောက်တဲ့အတွက် မရဏခွင်မှာ ဗုဒ္ဓဟူးချည်းဘဲ ၆ လုံး ဖြစ်နေပါတယ် .. အဲဒါ ဘယ်လိုကောက်ချက်ချရပါမလဲ.. ဆရာအဆင်ပြေရင် ပြောပြပေးပါလား..။
ခင် on July 29, 2011 at 4:18 pm said:
Dr.Tin Bo Bo on July 29, 2011 at 4:55 pm said:
တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ အနေအထားဘဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မွေးသက္ကရာဇ်လေးကို ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မရေးချင်ရင် utinbobo@gmail.com ကို ပို့ပေးပါ။ အသေအချာ လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်ချင်လို့ပါ။ (၁)ကြွင်း ဗုဒ္ဓဟူးသားနဲ့ တူတယ်။
nadi on July 31, 2011 at 1:32 pm said:
ဖတ်လို့ ကောင်းပြီး.ပညာရပါတယ်..ဆရာ..အွန်လိုင်း.ဗေဒင်..ပညာ.. သင်ကြားရေးက.. ဘယ်တော့လောက်စမှာလဲ ..ဆရာ..စောင့်မျှော်နေလို့ ပါ.
zaw lat on July 31, 2011 at 10:58 pm said:
We are waiting what you write and it is worth to wait and read. You are really Researcher.
red rose on August 1, 2011 at 4:01 pm said:
လာဖတ်သွားပါတယ်ဆရာ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..နောက်ဆောင်းပါးအတွက် စောင့်မျှော်နေကြောင်းပါ..ဆရာ ကျန်းမာပါစေ
Juno on August 3, 2011 at 5:56 am said:
ဆရာ မရဏခွင်မှာ ဗုဒ္ဓဟူးချည်းဘဲ ၆ လုံးဖြစ်နေတဲ့ ၁ ကြွင်း မဟာဘုတ် ဗုဒ္ဓဟူးသားအတွက် မွေးသက္ကရာဇ် ပို့ထားပါတယ် ဆရာ.. ဆရာအားလို့ လေ့လာပြီးရင် အဲဒီအတွက် သုံးသပ်ချက် ကလေးတော့ သိပါရစေနော်..
Juno on August 4, 2011 at 7:34 am said:
ဆရာ.. သုံးသပ်ပေးချက်အတွက် ကျေးဇူးများစွာ တင်ပါတယ်..
ကျန်းမာ ချမ်းသာစေရန် မေတ္တာ ပို့သပါတယ်..
ငြိမ်း on August 5, 2011 at 6:21 am said:
တကယ်လို့ ကိုယ်နဲ့ မွေးနှစ် မွေးနေ့ မွေးလ (တစ်ရက်ထဲမွေးတဲ့သူ) နဲ့ လက်ထပ်ရင်ကော ဘာတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ ညံ့တဲ့နှစ်မှာပို ညံ့ပြီး ကောင်းတဲ့နှစ်မှာ ပိုကောင်းနိုင်မလား ဆရာ။
Dr.Tin Bo Bo on August 5, 2011 at 8:06 am said:
ဗေဒင်ပညာသက်တမ်း အနှစ် (၃၀)ကျော် အတွင်းမှာ တစ်နေ့ထဲမွေးသူခြင်း လက်ထပ်ထားတာ (၃)တွဲဘဲ တွေ့ဘူးသေးတယ်။ ယေဘူယျတော့ ကောင်းရင် အရမ်းကောင်းမယ်/ဆိုးရင် အရမ်းဆိုး မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆရာလက်တွေ့ တွက်ချက် အသုံးပြုနေတဲ့နည်းက တစ်နေ့ထဲမွေးရင်လည်း မတူနိုင်တဲ့ တွက်နည်းကို သုံးတော့ ချွတ်စွပ်တော့ မတူနိုင်ပါဘူး။ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ကိုယ်တိုင် တွက်နည်းလေးတွေက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဗေဒင်မတတ်သူတွေလည်း တွက်နိုင်အောင် တင်ပေးထားတာပါ။ ဆရာကိုယ်တိုင် မသုံးပါဘူး။
myo chit on August 12, 2011 at 12:33 pm said:
ကောဇာမဟာဘုတ်အတွက် ခ၇စ်နှစ် ကို ၂ ခါပိုင်းတွက် ရမလား ဆရာ
Dr.Tin Bo Bo on August 12, 2011 at 2:04 pm said:
မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းဘဲ။ သူက မွေးနေ့ကို မူတည်ပြီး ဒီနေ့ကနေ နောင်လာမယ့် တစ်နှစ်လုံးအတွက် (နိမိတ်ယူလိုက်တာ) ဖြစ်လို့ ခရစ်နှစ်ပြောင်းသွားသွား/မြန်မာသက္ကရာဇ် ပြောင်းသွားသွား မွေးနေ့ကျတဲ့ ခုနှစ်က မဟာဘုတ်ခွင်ကိုဘဲ ဆက်ယူရမယ်။ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)နေ့မွေးသူ/မြန်မာနှစ် သင်္ကြန်အတက်နေ့မွေးသူများတောင်မှ နောက်နေ့မှာ ခုနှစ်ပြောင်းသွားပေမယ့် သူ့မွေးနေ့ကျတဲ့ ခုနှစ်ကိုဘဲယူရမယ်။ ဒါအရေးကြီးတယ်။
Aung htet ko ko on August 16, 2011 at 3:36 pm said:
ဆရာခင်ဗျာကျွန်တော်က၃ကြွင်းရာဇဘွားတနင်္ဂနွေသားပါ။၂၀၀၉ ဟာအဆိုးဆုံးမဟုတ်ပေမယ့် အမှတ်တရဖြစ်ရပ်များကိုမရှိတဲ့ဆိုးတဲ့နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
dr.tinbobo on September 20, 2011 at 11:47 am said:
မေးခွန်းထဲမှာဘဲ အဖြေပါနေပြီလေ။ မွေးနေ့မွေးရက်လည်း ထပ်တူ မကျဘူး။ မွေးတဲ့ ခုနှစ်ခြင်းလည်း မတူဘူး။ အသက်ခြင်းလည်း မတူဘူး။ ဒီတော့(၃)ကြွင်း တနင်္ဂနွေ တစ်ခုတည်း တူတာနဲ့ အဖြစ်အပျက်ခြင်း တူရမလားကွဲ့။ ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ဘူးလေ။ ဆရာ့ဆောင်းပါးမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ (၃)ကြွင်း တနင်္ဂနွေအားလုံး သိပ်ကောင်းမယ် (သို့) သိပ်ဆိုးမယ်ဆိုတဲ့ စာသားမျိုး မပါပါဘူး။
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,799)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,439)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,204)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,048)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,075)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,392)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,211)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,715)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,761)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,411)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,357)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,220)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,165)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,135)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,456)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,416)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,092)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,908)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,764)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,756)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,293)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,897)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,790)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,745)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,614)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,570)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,354)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,192)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,165)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,066)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !